Rajoelina Andry: “Vonona amin’ny fifidianana izahay” | NewsMada
Rajoelina Andry: “Vonona amin’ny fifidianana izahay”
Par Taratra sur 02/07/2018
Amin’izao ankatoky ny fifidianana izao, mitohy ny fitsidiham-paritra ataon’ny filohan’ny Tetezamita teo aloha. Ambarany amin’izao fa vonona amin’ny fifidianana izy.
“Manara-dalàna izahay, manaiky ny zavatra atao rehetra. Koa na hatao amin’ny novambra na desambra ny fifidianana: vonona izahay”, hoy ny filohan’ny tetezamita teo aloha, Rajoelina Andry, nanohy ny fitsidiham-paritra tany Fenoarivo Atsinanana, faritra Analanjirofo, afakomaly.
Gaga izy amin’ny datim-pifidianana, ny 7 novambra ny fihodinana voalohany ary ny 19 desambra ny fihodinana faharoa. Efa tsy maintany intsony izany. Nefa milaza ny And. 8 amin’ny fanapahan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) fa tsy maintsy hatao amin’ny maintany ny fifidianana amin’ity taona ity.
“Hataontsika izay zavatra rehetra ampanantenaiko. Fanamby no ataontsika”, hoy izy. Ny zava-misy teto amin’ny firenena: tsy nisy nanana vina nifanarahana tamin’ny vahoaka ny filoham-pirenena rehetra izay nifandimby. Efa miova izao ny fomba fanaovana politika. “Koa hifanaraka isika na hanao fifanekena sosialy: izay zavatra holazaiko aminao, hotanterahiko”, hoy ihany izy.
“Ampio aho mba hahazoako manampy anareo”
“Ampio aho mba hahazoako manampy anareo. Hoentiko eto izay nambara hotanterahina. Tsy ho tanteraka izany raha tsy mifankatia isika”, hoy izy tany Mananara Avaratra, tamin’ny loakandro. Ny tanora ihany no afa-mahafantatra ny zavatra ilain’ny tanora. Mila tanora manana vina i Madagasikara, tanora tia tanindrazana, tanora mitsinjo ny vahoaka…
Mbola betsaka ny tanora tsy an’asa ao Mananara Avaratra, mbola miaina ao anatin’ny haizina amin’ny jiro tapatapaka sady lafo. Izay no nanaovana ny Fandraisana andraikitra hampandrosoana haingana an’i Madagasikara (IEM). Mba hitondra hazavana ho an’i Madagasikara, ao Mananara Avaratra koa.